တရုတ်အမြင့် Precision ချွန် Collets, တိကျပြတ်သားမှုချွန် Collets, 65Mn 4mm ချွန် Collets ထုတ်လုပ်သူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > နွေဦး Colletsအခြားအ Collets
အခြားအ Collets ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မြင့်မားသော Precision ချွန် Collets, တိကျပြတ်သားမှုချွန် Collets ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, 65Mn 4mm ချွန် Collets R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မြင့်မားသော Precision 65Mn 6mm ချွန် Collets
65Mn 4mm ချွန် Collets မြင့်မားသောတိ
တိကျပြတ်သားမှု 3mm ချွန် Collets
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 2.4 - 2.6 / Piece/Pieces
65Mn 4mm ချွန် Collets မြင့်မားသောတိ ချွန် Chuck, Universal ကွိစက် Chuck, U2 ကွိစက် Chuck, Mills Chuck, စက် Collet ကြိတ်။ ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲစာအုပ် 1. ပစ္စည်း: 65Mn 2. ခွန်အား: Clamping တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း HRC55 ~ 60, elastic ဇုန် HRC40 ~ 55 ZZ-00030 ကြိတ်စက် Chuck ပြင်စက်ဝိုင်း 20, စုစုပေါင်းအရှည် 122 တည်နေရာအား Cone...
တိကျပြတ်သားမှု 3mm ချွန် Collets ချွန် Chuck, Universal ကွိစက် Chuck, U2 ကွိစက် Chuck, Mills Chuck, စက် Collet ကြိတ်။ ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲစာအုပ် 1. ပစ္စည်း: 65Mn 2. ခွန်အား: Clamping တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း HRC55 ~ 60, elastic ဇုန် HRC40 ~ 55 ZZ-00030 ကြိတ်စက် Chuck ပြင်စက်ဝိုင်း 20, စုစုပေါင်းအရှည် 122 တည်နေရာအား Cone...
တရုတ်နိုင်ငံ အခြားအ Collets ပေးသွင်း
ချွန် Chuck, Universal ကွိစက် Chuck, U2 ကွိစက် Chuck, Mills Chuck, စက် Collet ကြိတ်။
1. ပစ္စည်း: 65Mn
2. ခွန်အား: Clamping တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း HRC55 ~ 60, elastic ဇုန် HRC40 ~ 55 ZZ-00030 ကြိတ်စက် Chuck
ပြင်စက်ဝိုင်း 20, စုစုပေါင်းအရှည် 122 တည်နေရာအား
Cone '' 35 ° 12 taper
အဆိုပါကို aperture 18mm ရှည်ဖြစ်သည့်၏, 2-28mm ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ collet ၏ Clamp ချည်တင်းမာမှုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အကှေ့အကောကျဖြစ်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်စက်, တစ်လောကလုံးကြိတ်စက်ကြိတ်ထွင်းထုဓါးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မြင့်မားသော Precision ချွန် Collets
65Mn 4mm ချွန် Collets